Hoyga > Alaabada > Heerkulka Wejiga Hore ee Caafimaadka Joogtada ah > Heerkulbeegga Wejiga Hore ee Joogtada ah ee Caafimaadka La-xiriiriyay
Heerkulbeegga Hore ee Caafimaadka Joogtada ah ee Caafimaadka ayaa ah Qoriga Heerkulbeega Joogtada ah ee Jidh-dilay, QIIMEYNTA LA-XIRIIRKA-Uma baahnid inaad la Xiriirto, Nadiifiso Caafimaadana Iska Ilaasho Infekshannada Gudbinta.
Xilliga fayraska faafa iyo cudurka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus', wuxuu dadka u oggolaanayaa inay cabbiraan heerkulka jirka adigoon is taaban. Iska ilaali taabashada feyraska faafa.
Tusaale ahaan, cisbitaalada, qaadashada heerkulka jirka ee dadweynaha, iyo helitaanka dadka leh heerkul sare oo jirka ah oo laga yaabo inuu ku dhici karo fayraska waqtigiisa, waxay ka caawisaa dadka inay helaan fayraska waqtigooda isla markaana ku daaweeyaan waqtiga si ay u soo jiitaan dareenka.
Shirkaduhu sidoo kale waxay u baahan yihiin heerkulbeega wejiga hore ee Joogtada ah ee La-xidhiidho ee Caafimaad ahaan si looga cabbiro heerkulka jidhka 3-4 jeer maalintii, lasoco heerkulka jidhka, ogaanshaha suurtagalnimada fayras, go'doominta iyo daweynta dadka qaba fayraska.
Fayrasyada waxay u baahan yihiin in si wanaagsan looga hortago oo loola socdo. Isticmaalidda heerkulbeegga wejiga hore ee Joogtada ah ee Caafimaadka La-xiriirinta ayaa ku caawin kara!